IZIHLANGU ZASEBAFFIN-INGQUNGQUTHELA YAMADODA NOLAWULO LOVAVANYO LWEEBHUTSI EZINKULU - IZIXHOBO
Izihlangu zaseBaffin-Ingqungquthela yamadoda noLawulo loVavanyo lweebhutsi ezinkulu
Inkampani yaseCanada eyakhiwe kwimeko enzima kunye namaqondo obushushu abandayo eGreat White North, iBaffin iya kuba ligama elaziwa kwilizwe liphela kushishino lweebhutsi.
I-Baffin igxila kwimizamo yayo ukuba phambili kwezobuchwephesha, izihlangu ezikumgangatho ophezulu kunye neZambatho.
Xa ukhetha iibhloko zeBaffin, oku kuyacaca. Bangazilinganiseli nje kwizihlangu kuphela, bavelisa isinxibo ngokunjalo.
Ngo-1979 kuya kuphawula ukuqaliswa kwegama eliza kuqhubeka kude kube namhlanje. I-Stony Creek, Canada iya kuba likhaya eBaffin njengoko beqala ukwandisa kunye nokuphuhlisa amandla abo okuvelisa. Ngokusebenzisa eyona nkqubo iphambili kunye nenqanaba eliphezulu lokuvelisa ngelo xesha, baya kuqala ukufumana ukuthembeka okulandelayo ngokukhawuleza.
Wonke umntu ovela kumajoni, abathanda ngaphandle ukuya kubasebenzi bafumene ukusetyenziswa kweeBaffins zabo. Inkampani ayisiyonto xa ingaqhubeki ngokungaguquguqukiyo. Izixhobo zoqobo ukusukela kwiintsuku zokuqala okwangoku zisetyenziselwa ukwenza iimveliso zabo zangoku. Nangona uninzi lweenkqubo zazo zihambile, izinto ezisisiseko ezisebenza kakuhle zihlala zingatshintshi.
Ukuthuthuzelwa kweenyawo kunye namava onxibayo kubaluleke kakhulu eBaffin kwaye ngoyena ndoqo wokulwela ukufikelela kubo. Akukho mntu ufuna ukunxiba izihlangu ezingathandekiyo, kwaye isiseko sabathengi bakaBaffin sinokuwuthathela ingqalelo lo mba wokhuseleko. Abathengi bafuna ukunxiba ezi bhutsi kuba zenziwe ukuba zikhululeke kakhulu kwaye zomelele.
Xa kuvavanywa izibini ezimbalwa zeemodeli eziphezulu zeBaffin, iNgqungquthela yaMadoda kunye noLawulo lweeMoto Boots. Apha ngezantsi, uya kufumana uphononongo lwethu kunye novavanyo lwentsimi ngekhephu eligubungele iintaba zaseColorado.
Ifumaneka ngokwahluka kombala omnyama nomdaka
5ºC / 41ºF ukuya -50ºC / -58ºF ubushushu
Ubushushu bomzimba obunokususwa, i-liner eyahlukeneyo
Ubushushu obusezantsi be-B-Tek Lite yokugquma bubushushu
Ubunini obuphezulu beShell kunye neAirGrip
Amanqaku oQhakamshelwano ngerabha yePolar anikezela ngokubambelela okukhulu
Umphakamo wobude obuphakathi uvimba ingqele ebandayo
Isikhumba esingamanzi kunye nokwakhiwa kwenayiloni
Inkqubo yokuqinisa ngaphambili kunye ne-toggle edityanisiweyo
Lawula iMax Boot
-70ºC / -94ºF ubushushu
I-Thermanplush isuswe, maleko amaninzi (iileya ezi-8) yendlela yangaphakathi yokuqala kwebhokisi
Ibhedi yeenyawo ejijekayo yokuthuthuzela kunye nokufunxwa
Igobolondo yerabha yeArctic yokuxhasa iinyawo
I-Polar rubber outsole (Icepaw) yokubambelela ngokuqinileyo kwiindawo ezibushelelezi zasebusika
Ukuqiniswa kweeleyisi ezininzi ze-D
I-Timberwolf egcwele ingqolowa egalelwe ulusu kunye nolwakhiwo lwenylon
Umthungo ongatywinwanga ongenamanzi
Ifumaneka ngombala omnyama kwaye onxibe umbala omdaka
Ingqungquthela yeBaffin yamadoda yokuHlola iBoot
Eyilelwe ukumelana namaqondo obushushu aqhaqhazelayo aqala ezantsi ukuya kuma-58 degrees Fahrenheit, I-Men's Baffin Summit Snow Boots lulongezo olufanelekileyo kwikhabethe lakho lasebusika. Ukugqibelela konke kwiphakheji enye yekhephu, uyakufumana yonke into iinyawo zakho eziyifunayo nakwezona ndlela zinzima ngakwimeko enzima. Ukugubungela zonke iziseko kwaye kungabikho nkcitho, baya kuzikhusela iinyawo zakho kunye namaqatha, kwaye bazigcine zifudumele kwaye zomile, konke oko kukhulisa intuthuzelo kunye nokuhamba. Ugqibelele nakowuphi na umsebenzi ovela kwifosholo yekhephu ukuya kwimidlalo yekhephu, ezi zibhotshi zakhiwa ukuba zihambe nawe ngelixa zikukhusela kwizinto. Akuyi kufuneka uncame intuthuzelo ukufudumala kunye nokukhuselwa.
I-violet tattoo emnyama namhlophe
Iqukethe isikhumba esomeleleyo kunye nesomeleleyo sokungena kwamanzi kunye nenayiloni, unokuqiniseka ukuba iinyawo zakho ziya kuhlala zomile. Iibhutsi zikwabonisa iigobolondo zeSuperlite kunye neAirGrip® enendawo yokuphuma yerabha yePolar® kunye neendawo zonxibelelwano zokubamba okungakholelekiyo kunye nokutsala okuthembekileyo kunye nokukhanya okulula. Unokuhamba kumhlaba womkhenkce ombhoxo ngokuzithemba kunye nokuhamba ngokulula nangokugcweleyo.
Nge-B-Tec Lite lining kunye ne-multi-layered insulation, unokuqiniseka ukuba iinyawo zakho ziya kuhlala zifudumele kwaye zikhululekile ngalo lonke ixesha. Ubushushu obunokubumba bubushushu kwaye bunikezela ulungelelwaniso olufanelekileyo kwimilo yonyawo lwakho, ukuze ufumane intuthuzelo ephezulu.
I-Baffin Summit Snow Boots zibonelela ngenkxaso ephezulu yeenyawo zakho ngeengqameko ezidibeneyo kunye neendlela ezininzi zokukhusela. Zibonisa inkqubo engatshintshiyo yangaphambi kokuqhobosha ekulula ukuyisebenzisa kunye nesitayile. Kunye neshafti yaphakathi evekini, bakwabandakanya ishelufu ebunjiweyo efanelekileyo ngasemva kwezithende ukuze ubambe ngokufanelekileyo umtya wakho wekhephu!
Iibhutsi zilinganisa i-intshi ezili-10 ukuphakama kwaye zinobunzima obuziikhilogram ezine. Ziyafumaneka ngombala omnyama, kubungakanani ezintandathu ukuya kwezili-15.
Uhlolo lweBaffin lwaMadoda lokuLawulwa kweMax Boot
Ukunxiba okuqhelekileyo kwabesilisa
I-Baffin Men's Control Max Iibhutsi ezigqunyiweyo zizandla ezantsi, ezona zihlangu zinzima kwezona zinxitywayo kunye neemeko eziqatha. Eyilelwe ngokukodwa ukumelana nokusetyenziswa okwandisiweyo, umhlaba omdaka, kunye nezinto ezigabadeleyo, lonke elixa ugcina iinyawo zakho zikhululekile, zifudumele, kwaye zikhuselekile, ezi zezinto ekufuneka uzenzile.
Ngeeoli ezitsalwe ngokupheleleyo, uya kuba nakho ukuqhuba ngaphezulu komhlaba ongalinganiyo kunye nocelomngeni ngaphandle kwengxaki okanye amaxhala okuphulukana nokubamba kwakho. Ezi zihlangu ngokuqinisekileyo ziya kuma emhlabeni. Banobumba be-EVA, iinzwane ezijikelezileyo, kunye nokuphuma kwerabha.
Ukuvavanywa kwimozulu ebanda kakhulu, banobushushu obumangalisayo be-70 degrees celsius kunye ne-94 degrees Fahrenheit, ukuze uqiniseke ukuba iinzwane zakho aziyi kuba ngumkhenkce. Ngobushushu obugqithisileyo obugqume ubushushu, babonisa i-liner yebhuthi ekhutshiweyo ehleli phezulu kumathole akho kwaye ujikeleze ulusu lwakho ngolunye ukhuseleko, kunye neentambo eziphezulu ze-cinching ze-snugger fit ezogcina umoya obandayo uphume. IiBaffins zikwabonisa ukukhuselwa okungangeni manzi kunye nemitya evaliweyo, kuba kukho omnye umqobo ngokuchasene nokubanda, imvula, iqhwa, ikhephu, isichotho, nayo nayiphi na enye into ojamelana nayo.
Ezi bhutsi zimangalisayo zekhephu azizami nje ukugcina iinyawo zakho zikhululekile, zikhuselekile kwaye zifudumele, kodwa ziyazama kwaye ziphumelele ekubeni kwifashoni ngokunjalo. Eyona nto inesitayile kumdibaniso wombala ofumanekayo, onxibe umbala omdaka kunye nomnyama okanye mnyama namnyama, ungazinxiba ngokuzithemba ukuba awuzukuhlala nje upholile, kodwa uyakubonakala umhle kakhulu. Baya kulungelelanisa ngokugqibeleleyo nayo yonke imisebenzi onayo, kungakhathaliseki ukuba kunzima kangakanani, kwaye baya kunika ngokufanelekileyo ngokufanelekileyo kwi-wardrobe yakho yasebusika.
I-Baffin Men's Control Max Iibhutsi ezigqunyiweyo zenziwe ngomgangatho wokungenisa elizweni ufele ogqunyiweyo ogcweleyo kunye neempawu ezininzi zokubopha intambo ye-D. Zifumaneka ngobungakanani be-M ezisixhenxe ukuya kwi-14 M.
Intliziyo b tattoo ipikoko enentsingiselo
izimvo zokuhombisa umhlaba ngamatye angasemva
mens umva weetatoo zentamo
Uyilo lwe tattoo kwimilenze yamadoda
imibono yakhe kunye neetattoo zakhe ezifanayo
Izimvo zepatio yangasemva kuhlahlo-lwabiwo mali
iitattoo ezincinci esifubeni kubafana